Waqti fiican ku qaado tuurista mashiinnada ciyaartoyda kale ee Fling Fighters | Androidsis
Fling Fighters waa ciyaar dagaal leh dabacsan, laakiin mid aan haysan tayo ku filan oo lagu helo noocyo badan oo dagaalyahanno ah iyo deegaanno firfircoon oo ay tahay inaan si wanaagsan uga taxaddarno meesha aan cagaha saareyno.
Ciyaar bilaash ah taas wuxuu kuu geynayaa ciyaaro badan ka dhanka ah ciyaartoyda kale, inkasta oo aad sidoo kale la dagaallami karto sirdoonka macmalka ah ee ka soo horjeedka; jidka agtiisa, sifiican ayaa loo fuliyay taasna maahan soo noqnoqoshada aan ka heli karno ciyaaraha kale.
1 Inuu wax ku tuuro madaxiisa
2 Dabinno badan oo ku yaal Dagaalyahannada Fling
3 U dirir inaad noqoto kan ugu fiican
Inuu wax ku tuuro madaxiisa
Marka hore, Fling Fighters waxay layaab ku noqotaa habka ay kor ugu qaaday dagaalka u dhexeeya laba iska soo horjeed kuwaas oo waxay u dhaqaaqi doonaan wax yar oo yaab leh. Dhaqdhaqaaqan waxaa sabab u ah xaqiiqda ah inaysan joojin doonin inay wax ku tuuraan "madaxooda." Inkastoo aysan jirin wax ka mid ah kuwaas xirfadaha dagaalyahanada wadada gaar ah kaas oo aan ku garaaci karno ka soo horjeedka isla markiiba.
Waxyaabaha halkan ku yaal Dagaalyahannada Dagaalku waxay isku dayaan inay ogaadaan marka waa inaan bilowno mashruucyadaas in aan gacanta ku hayno. Raadkeeda ayaa isbeddeli doona markaan gadaal uga dhaqaaqno bidix ilaa midig. Waana in Dagaalyahannada Dagaalamaya ay la kulmaan dagaal u eg cinwaannadaas u dagaallamaya sida Dhimashada Kombat. Waxa aan u baahanahay inaan ka feejignaano waa inaan ka sii fogaanno dhaqdhaqaaqa ka soo horjeedka inuu sii daayo mashruucan isla markaana uu jirkiisa si fiican ugu garaaco.
Laakiin kuma sii nagaan doonto oo keliya ogaanshaha sida loo geeyo dharbaaxo wanaagsan oo lala socdo, laakiin waa inaan ku qasban nahay isticmaal bay'ada iyo dabin si ay u kacaan oo leh guul. Tusaale ahaan, khariidada tareenka waa inaan ka taxaddarnaa inaan ku dhicin jidka. Tan awgeed waxaan u isticmaali karnaa boodboodka iyo ka soo horjeedka kuwa naga soo horjeeda gaarigiisa oo sidaas ayaan ku garaacnay laakiin si fiican.
Dabinno badan oo ku yaal Dagaalyahannada Fling
Qodobka kale ee xiisaha leh ee Dagaalamayaasha Fling Fighters oo aan ku ciyaari karno si aan ugu hiilino waa dabinnada. Aad ayey u kala duwan yihiin haddaynu naqaanna sida loo adeegsado, kuwa naga soo horjeedaa way ku adkaan doontaa inuu naga guuleysto. Waxaa jira wadar ahaan 9 farsamooyin ama dabinno ciyaarta, markaa baro sida ay u shaqeyso.
Marka laga hadlayo waxyaabaha aan haysanno, guud ahaan waxaa jira 5 jasiiradood oo ay tahay inaan ku guuleysano, qaar 40 xaraf oo aan ku ciyaari karno iyo taxane madax ah oo jasiirad kasta leh oo aan la macaamili doono, laakiin si fiican. Waxaan sidoo kale horumarin karnaa kaararka iyo jilayaashaas aan la macaamili doono boqolaalka dagaal. Waxaan kudhowaad dhihi karnaa in Craneballs uusan ilaawin wax kasta oo lagu qaabeeyo ciyaar sifiican loo soo koobay meelkastoo aad ka eegtaba.
Muuqaal kale ayaa ah qaabka kumbuyuutar badan oo internetka ah iyada oo baashaalka loogu dhufto si jibbaar ah. Waxaan sidoo kale heli karnaa qaab maxalli ah oo bilaash ah, caqabado 2-maalmood ah iyo hoggaamiye aan waxoogaa ka qaniino oo aan ku sii wadno ku raaxeysiga waayo-aragnimada dagaal ee Fling Fighters ee deeqaha Android.
U dirir inaad noqoto kan ugu fiican
Halgamayaasha Dagaalku waa a ciyaar freemium bilaash ah oo loogu talagalay android oo lagu gartaa sida ay u noqon karto madadaalo iyo firfircoonida dagaalladeeda. Marar badan nasiibku wuxuu ku xisaabtami doonaa qodobka go'aaminta guusha, laakiin tan si ay u ahaato sidaas darteed waa inaan mar labaad iyo mar labaad isku daynaa inaan dhammaynno ka soo horjeedka
Farsamo ahaan si wanaagsan ayaa loo qabtay, inkasta oo marka hore ay umuuqato inay tayo yartahay. Sidii aan nidhi leh 4Pillars maalmo ka hor, waa inaad in yar ku samirto kulankaan si aad uga faa iideysato. Si loo muujiyo bay'adooda, noocyada kala duwan iyo muuqaalka muuqaalka ah oo si fiican loo daryeelay. Waxa kaliya ee la hagaajin karo waa animations-ka aan macquul ahayn. Hadday ujeeddadu ahayd inay ahaayeen kuwo qosol badan, waa inaad waxyar cusbada ka yaraysaa markii aad nooleyneyso si ay madadaalo badan u yeeshaan oo qosol u keenaan.
Dagaalyahannada Dagaalama ma noqon doonaan ciyaar lagu xasuusto, inkasta oo dagaalyahanadooda badan ay la dagaallamaan ciyaartoy kale ay awoodi doonaan inay kugu xirnaadaan muddo dheer; haa, ilaa iyo intaadan aadin ciyaar kale sida Da'da Da'da Samurais ee seeftoodu ku dagaallanto waa cajiib.
Animooyinka waa in la daryeelaa
Developer: Kubbadda cagta
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Ciyaaraha Android » Fling Fighters waxay bixisaa dagaal dabacsan iyo soo bandhigida mashruucyo ka dhan ah ciyaartoy kale